Archive du 20190502
Hery Gasy Manankasina “Hanantanteraka izay voasonia izahay”
Tonga tetsy anivon’ny CFM etsy Ampefiloha ny talata 30 aprily teo ny kandida ho depiote laharana faha 3 ao amin’ny boriborintany voalohany,
Antoko Teza Miisa 4 ny fahotana mahafatin-dRajoelina
Nandefa taratasy misokatra ho an’ny fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara na FFKM omaly alarobia 1 mey ny avy eo anivon’ny antoko politika Teza.
Karama farany ambany Nanaiky ilay 200 000 Ar ny Vondron’ny mpampiasa
Tapaka fa 200 000 Ariary ny karama farany ambany eto Madagasikara. 173 ora isam-bolana ny ora iasana, tsy hitakiana hetra ny karama latsaky ny 350 000 Ariary.
Tsenam-baro-panjakana Mijoro hanara-maso ireo gaboraraka ny OIMP
Raha ny tsenam-baro-panjakana no lalana iray hahafahana mampandroso ny firenena amin’ny alalan’ireo fananganana
Fahamaikana nitera-doza Fiara nitondra marary nandratra ankizy teo Tsaramasay
«Nisy ra nandriaka ny arabe, vaky ny lohan’ilay zaza, niparitaka ny nifiny».
Hazakazaka hoan’ny Fanantenana Nanodidina ny 3000 ireo nandray anjara
Tontosa teto Antananarivo omaly alarobia 01 mey 2019 ny hazakazaka hoan’ny Fanantenana andiany voalohany nokarakarain’ny Fiangonana Advantista Malagasy niaraka tamin’ny ministeran’ny tanora sy fanatanjahantena sy ny ministeran’ny fahasalamana ary ny ministeran’ny mponina Malagasy nanatontosa.
Hazakazaka ara-panatanjahantena Nahavory olona mihoatra ny 3.000 ny fiangonana advantista
Tontosa soa aman-tsara omaly alarobia fiandohan’ny volana mey, nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny asa ilay hazakazaka fanantenana nokarakarain’ny fiangonana advantista tetsy Mahamasina.
Mpibata fonjam-by Malagasy Nandrombaka medaly 9 tany Egypte
Ny Dgs “Tale Jeneralin’ny Fanatanjahantena Malagasy”, Rtoa Rosa Rakotozafy, nisolotena ny minisitra Tinoka Roberto no nitarika ny fitsenana ny delegasiona Malagasy,
Fifaninanana Moto Scooter Red Dog Hangotraka indray ny eny Imerintsiatosika
Hangotraka indray ny eny Imerintsiatosika fa ho tontosaina eny amin’ny Circuit Srk “Serana Racing kart” eny an-toerana, amin’ny alahady 5 mey 2019 ho avy izao,
Nifarana teo amin’ny Tsak tsak zato, arivo nampalaza ny filoha teo aloha Tsiranana ny fitondrany.
Fahavitan-tena ara-tsakafo sy fanabeazana Vonona hanampy an’i Madagasikara i Inde
Fototra iaingan’ny fampandrosoana ny firenena ny fahavitan-tena ara-tsakafo sy ny fanabeazana ary vonona ny hizara ny traikefany sy hanampy an’i Madagasikara amin’ireo sehatra roa ireo i Inde,